एक महिला pozadimatochnom ठाउँ मा तरल संचित छ, यो सधैं उनको शरीर असाधारण कुरा हो कि होइन। यो राम्रो एक महिलाको शरीर मा निरन्तर को प्रक्रिया को cyclical प्रकृति संग सम्बन्धित सामान्य घटना हुन सक्छ। तर, दुर्भाग्य, अक्सर यसो रोग को एक लक्षण छ।
सामान्य मा पछि गर्भाशय मा भएको श्रोणि केही तरल हुन सक्छ। यो पनि एकदम प्राकृतिक छ ovulation साधारण दिनमा भन्दा धेरै ठूलो संख्या त्यहाँ रहेको छ जो गर्भाशय, पछि मुक्त तरल पदार्थ छ कि। यो ovulation स्थान लिएको छ कि मुख्य सूचकहरू को छ। जब ovulation मूख्य (ठूलो) follicle बेला ovary मा आउँछ, यसको सामग्रीहरू pelvic क्षेत्र मा प्राप्त र गर्भाशय पछि जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। यो resorbed छ केही समय पछि (अवशोषित) र चाँडै अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा निर्धारित छैन।
महिनावारी पनि तरल pozadimatochnom ठाउँ मा उत्पन्न गर्न सक्छ समयमा (को पेट गुहा मा-pelting रगत तथाकथित)। यो एक महिला खतरामा छैन। बस महिनावारी समयमा endometrium झुक्किएर पेरिटोनियम मा menstrual रगत संग उत्प्रेरित गर्न सक्छ।
यी बाहेक, एक महिलाको जीवनमा यी एकदम प्राकृतिक र अपरिहार्य cyclical क्षणमा, मासिक धर्म र ovulation रूपमा, स्पेस pozadimatochnom मा तरल पदार्थ रोगहरु को मामला मा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एक भडकाऊ प्रक्रिया हो भने, यो छ, को पाठ्यक्रम, महिला लैंगिक अंगहरु मा गर्भाशय पछि भडकाऊ exudate गर्न सक्छ। तीव्र endometritis मा, विशेष पोस्ट-गर्भपतन अवधिमा पनि श्रोणि मा नि: शुल्क तरल पदार्थ संकलन हुन सक्छ।
अल्ट्रासाउंड स्क्यानहरू एक तरल र डिम्बाशय apoplexy, peritonitis, ascites, purulent salpingitis, hemoperitoneum, घटना pelvioperitonita, endometriosis र अन्य रोगहरु को विकास मा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
त्यसैले गर्दा endomentrioznye गठन cysts, पेट दुखाइ बलियो रिसले पेरिटोनियम हुन्छन्। फलस्वरूप cysts Microperforated र आफ्नो सामग्रीहरू गर्भाशय पछि मुक्त तरल को उपस्थिति निम्त्याउँछ जो पेट गुहा, मा खन्याइएको गर्न सकिन्छ।
Pozadimatochnom तरल को पेट गुहा मा ठाउँ र अत्यधिक रक्तस्राव मा accumulates।
जब पेरिटोनियम मा piosalpinks देखि संचित पीप सम्भव तोडने रूपमा purulent salpingitis। यस मामला मा, यो जो जरुरी शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप आवश्यक एक विस्तृत peritonitis, विकास गरिएको छ। खुसीको कुरा, यो पीप को गर्भाशय वा pelvic क्षेत्र मा fallopian ट्यूब को बाहिर आए जस्तै कि, एकदम दुर्लभ छ।
Echogram अल्ट्रासाउंड उपस्थिति प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ र पेट गुहा pelvioperitonita मा, wherein ठाउँ मा pozadimatochnoe पनि बाहिर peritoneal तरल पदार्थ प्रवाह गर्न सक्नुहुन्छ। यसको रकम धेरै सानो धेरै ठूलो देखि दायरामा गर्न सक्नुहुन्छ।
को pelvic गुहा मुक्त तरल संकलित छ भने, यो क्यान्सर, जस्तै, डिम्बाशय को क्यान्सर को एक लुकेका प्रवाह प्रमाण हुन सक्छ। संग्रह transudate - अक्सर ascites सँगसँगै क्यान्सर को विकास को peritoneal गुहा मा (तरल)।
यदि बालक जन्ममा उमेर महिलाहरु मा अल्ट्रासाउंड को श्रोणि मा र गर्भाशय fertilized अन्डा बाहिर निःशुल्क तरल पदार्थ, रगत थक्के घेरिएको पाएका छन् डाक्टर एक निदान "अस्थानिक गर्भावस्था" बनाउन सक्छ।
तरल पदार्थ को संग्रह गरेर अन्य उदाहरणका लागि, पेट गुहा भित्र स्थित अङ्गहरूको रोगहरु, जिगर हुन सक्छ।
सामान्यतया, एक महिला त्यो अल्ट्रासाउंड समयमा pozadimatochnom ठाउँ मा तरल पदार्थ थियो कि बाहिर पाता। रोग लुकेको छ भने, यो विद्यमान स्वास्थ्य समस्या पहिलो अंक को निदान लागि यस्तो मूल्यवान विधि छ र महिला प्रजनन अङ्गहरू को रोगहरु को सही निदान गर्न डाक्टर मदत गर्नेछ।
तपाईं अन्तर्गत छन् भने अल्ट्रासाउंड स्पेस फेला pozadimatochnom तरल र त्यहाँ रोग अन्य संकेत उपस्थिति को कुनै अन्य अल्ट्रासाउंड प्रमाण हो, तपाईं खुलेर श्वास फेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं ठीक संभावना छ।
को menstrual चक्रको उल्लंघन। बारम्बार अवधि, उपचार र केही सुझावहरू
गर्भावस्था छ, र परीक्षण नकारात्मक छ। कारण
ग्रीवा बढाव: कारण, लक्षण र उपचार
महिला मा एचपीवी-संक्रमण - यो के हो? निदान र उपचार
स्तनपानको स्थापना। प्रसब पछि आउँदै दूध कुन दिनमा
जीवनी। Alain Vodonaeva: क्यारियर र व्यक्तिगत जीवन
लगानी - यो के हो? वस्तु र लगानी प्रक्रिया
भिटामिन "Makrovit": प्रयोगको लागि निर्देशन, contraindications
प्लास्टिक कार्ड भिषा प्लैटिनम: विशेषाधिकार, छूट, अतिरिक्त सेवाहरू
को Baskervilles को कुकुर को के नस्ल?
एक nobleman गर्ने हो? यो शक्ति र धन छ जो एक महान मानिस छ
Windows को लागि सफारी: लाभ र बेफाइदा
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा Gazprom को निर्माण। "लाटी केन्द्र"